INingizimu Afrika idinga ukugoma ngokushesha | Scrolla Izindaba
INingizimu Afrika idinga ukugoma ngokushesha
Njengoba isigaba sakamuva empini yeNingizimu Afrika yokulwa ne-Covid-19 siqala ngoMsombuluko, ososayensi baxwayise ukuthi lesi akusona isikhathi sokuphumula, futhi bagcizelela isidingo sokugoma inani elikhulu labantu ngokushesha okukhulu.
Lokhu kungenxa yokuthi imininingwane yakamuva ikhombisa ukuthi imithi yokugoma emibili, i-Novavax ne-Johnson & Johnson (J&J), ayisebenzi kangako ekulweni negciwane laseNingizimu Afrika kunalawo ehlukile kwamanye.
I-Novavax ibike ngoLwesine ukuthi umuthi wayo wokugoma ubusebenza ngempumelelo engu-50% ukuvimbela i-Covid-19 kubantu baseNingizimu Afrika, kanti e-UK lesi sibalo simi kuma-89.3%.
Khonamanjalo, i-J & J imemezele ngoLwesihlanu ukuthi ukusebenza ngokugoma kufinyelele kuma-72% e-U.S., Uma kuqhathaniswa no-57% kuphela eNingizimu Afrika.
Ngokwengeziwe, kwabikwa ngesonto eledlule ukuthi umuthi wokugoma i-Moderna unamandla aphindwe kasithupha ekulweni nohlobo lwegciwane laseNingizimu Afrika kunawo ahlukahlukene ase-UK.
Kodwa-ke, ochwepheshe bathi lokhu kugcizelela kuphela isidingo esikhulu sokugoma, nokuthi basenenani elikhulu emandleni abo okunciphisa i-Covid-19 enzima.
“Umdlalo wokugcina ukunqanda ukufa, ukunqanda izibhedlela ukuthi zingangeni enkingeni – futhi yonke le mithi yokugoma, ngisho nokubandakanya eyehlukile yaseNingizimu Afrika, ibonakala ikwenza lokho kakhulu,” kusho uDkt u-Amesh Adalja, uchwepheshe wezifo ezithathelanayo e-John Hopkins Centre for Health Security.
Kodwa-ke, eminye imigomo ingadinga ukuguqulwa ukuze ibhekane nezinkinga ezivelayo.
Umkhiqizi womuthi wokugoma i-Pfizer imemezele kuleli sonto ukuthi icubungula ukuthi iwushintshe yini umuthi wayo wokugoma ukuze ivikele kolunye uhlobo lwaseNingizimu Afrika.
Izinkampani ezinjenge-Pfizer kungadingeka ukuthi zisebenze ngokushesha kunokulindelekile njengoba uhlobo lwaseNingizimu Afrika lutholakele kuleli sonto ezindaweni eziningi e-U.S nase-U.K. ..
I-U.K yamemezela ngoMsombuluko ukuthi izoqala ukuhlolwa kwendlu ngendlu ukuze kutholakale futhi kuqedwe lokhu okuhlukile, njengoba ukwesaba kukhula ukuthi kuyanda njengoba kusakazeka emhlabeni wonke.
Yilapho umjaho wokuthola imijovo yokugoma eyenele bonke abantu baseNingizimu Afrika umi khona:
• Ngaphezu kwemithamo eyi-1 million ye-Covishield esiyitholile namuhla; silindele ukuthi eminye imithamo eyizi-500,000 evela e-Serum Institute of India ifike ngasekupheleni kukaNhlolanja.
• Sivikele imithamo eyizigidi eziyi-12 isiyonke esikhungweni se-COVAX somhlaba jikelele, esikhombise ukuthi sizokhipha imithamo elinganiselwa kuzigidini ezimbili ngoNdasa.
• Sithole imithamo yokugoma eyizigidi eziyisishiyagalolunye ku-J & J, siqale ngokulethwa kwikota yesibili. I-J & J inikeze i-Aspen, enye yezinkampani zethu zemithi, ukwenza le mithi yokugoma eNingizimu Afrika.
• Ngaphezu kwalokho, i-Pfizer yenze imithamo yokugoma eyizigidi ezingama-20 eqala ngokulethwa kwikota yesibili.